Semalt: क्रोममा कसरी साइट डाउनलोड गर्ने?
गुगल क्रोम अब तपाईं अफलाइन ब्राउजि for को लागी एक साइट डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, र यो एक कारण वा अर्को कारण आफ्नो वाइफाइ बाट टाढा छन् जो तिनीहरूका लागि खुशीको खबर हो। तपाईं सजिलैसँग आंशिक वा सम्पूर्ण वेबसाइटहरू, भिडियोहरू, अडियो फाईलहरू, र छविहरू गुणवत्तामा सम्झौता नगरी डाउनलोड गर्न अनुप्रयोग र क्रोम एक्स्टेन्सनहरूको ठूलो संख्याबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
SaveFrom.net क्रोममा साइट डाउनलोड गर्नका लागि एक उत्तम अनुप्रयोग हो। यस सेवाको साथ, तपाईं केहि भिडियोहरू, पाठ फाइल, वा छवि तपाईंको हार्ड ड्राइवमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ केवल केही क्लिकहरूको साथ। SaveFrom.net सँग एक स्वचालित बटन छ, कार्य सजिलो र सरल बनाउँदै। तपाईं ट्विटर र फेसबुकबाट पनि सामग्री डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, वा मिडिया फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूलाई MP4, MP3, 3GP WEBM, र FLV मा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम दुई तरिकाहरूमा काम गर्दछ: वेब अनुप्रयोग मार्फत (जुन विन्डोजसँग उपयुक्त छ), र तेस्रो-पार्टी विस्तार मार्फत।
२. PDF को रूपमा बचत गर्नुहोस्:
PDF को रूपमा बचत गर्नुहोस् तपाईंलाई क्रोममा साइट डाउनलोड गर्न अनुमति दिँदछ र बहु कार्यहरू सम्पन्न गर्न अन्तर्क्रियात्मक HTML-देखि-PDF वेब सेवा प्रयोग गर्दछ। यो विस्तार तपाइँको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ, र तपाइँ एक सशुल्क खाता को लागी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। उपलब्ध विकल्पहरू पृष्ठ अभिमुखीकरण, पासवर्ड सुरक्षा, पृष्ठ आकार, मार्जिन, र प्रारम्भिक दृश्य हुन्। यी सबै विकल्पहरूले तपाईंको कामलाई एक हदसम्म सहज गर्न सक्दछन्।
Media. MediaSave - नि: शुल्क संगीत डाउनलोड गर्नुहोस्:
मिडियासेभको साथ, तपाईं यूट्यूब, डेलीमोशन, र अन्य समान साइटहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ र क्रोममा आरामसँग सामग्री डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस अनुप्रयोगले तपाईंलाई ठूलो संख्यामा संगीत फाईलहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, जस्तै गीतहरू, पोडकास्टहरू, अडियो-पुस्तकहरू, चलचित्रहरू, र अन्य समान चीजहरू। यसले MP4, MP3, VND, WEBM, र Wav जस्तै ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो विस्तार स्थापना गर्न, तपाईंले इजाजतपत्र सम्झौता स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
V. vGet विस्तार:
यदि तपाइँ वेब सामग्री स्ट्रिम गर्न वा डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ vGet एक्सटेन्सनको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई साइट डाउनलोड गर्न र DLNA सक्षम टिभीसँग साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ। विकासकर्ताहरूले दावी गर्छन् कि यो एक्स्टेन्शन वेब सामग्री द्रुत गतिमा लोड गर्न डिजाइन गरिएको थियो, त्यसैले तपाईं यसलाई सजिलैसँग गतिशील वेब कागजातहरू डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Web. वेब स्क्रेपर:
यो उत्तम क्रोम एक्सटेन्सन मध्ये एक हो जुन तपाईंलाई द्रुत क्रोममा साइट डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। वेब स्क्र्यापरको साथ, तपाईं साइटम्यापहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र क्वालिटीमा सम्झौता नगरी डाटा / जानकारी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो मुख्य रूपमा विभिन्न वेब पृष्ठहरु मार्फत नेभिगेट गर्दछ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक वेब कागजात डाउनलोड गर्दछ। यो सबै अपरेटिंग प्रणालीहरूसँग उपयुक्त छ र क्रोम वेब स्टोरमा तत्काल डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ।
के तपाइँ क्रोममा साइट डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ? पेजआर्चीभरले तपाईंलाई दुबै सरल र गतिशील साइटहरूलाई लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ र तपाईंलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा डाउनलोड गर्न दिन्छ। तपाईं डाटा HTML वा CSV फाईलहरूमा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ वा अफलाईन ब्राउजि forको लागि तपाईंको हार्ड ड्राइभमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं वेब साइट को सही प्रकारको चयन गर्न विभिन्न वेब पृष्ठहरू, URL हरू, ट्यागहरू, शीर्षक, र उत्पाद विवरण फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कुञ्जीपाटी कुञ्जी (Ctrl-S को रूपमा चिनिन्छ) को साथ अभिलेखहरू बुकमार्क गर्न र बचत गर्न सक्नुहुन्छ।